avril 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
Alahady ivom-bokatry ny Sampana Dorkasy eran’ny sahan’ny FJKM
« Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy. »
Alahady faharoa ibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy mandritra ny volana aprily manao hoe: « Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy. »
RAHARITSALAMA Hantanirina, Diakona sampana Dorkasy no nitarika ny fotoana.
Ny Mpitandrina RAZAFINDRAKOTOFANJARIVELO Perle kosa no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Ny Litorjia amin’ny endriny faharoa no nentina nanatontosa ny fanompoam-pivavahana tamin’ny fito ora.
Ny Salamo 29: 1-2 no novakina hoentin-manome voninahitra an’Andriamanitra. Noventesina ny hira FFPM 146: 1 sy 2 avy eo.
Natolotra ny Tompo ny saotra sy ny dera ary ny laza noho ny fitiavany sy ny mbola fitahiany. Nangatahana ny Fanahy Masina hanatrika ny fotoana mba hitondra fihavaozana ho an’ny mpianakavin’ny finoana sy ho voninahitry ny Tompo.
FAMAKIANA NY VAKITENY
Nohiraina ny FFPM 142: 1 sy faha 4 mialoha ny vakiteny.
Vavaka: RAKOTONDRAMBOA Mirana no nanao ny vavaka mialoha ny vakiteny. Saotra, dera, laza ary voninahitra no natolotra ny Tompo, ary nangatahana ny Fanahy Masina hampitoetra ny Teny ao am-pon’ny tsirairay.
Tenin’Andriamanitra: Hanitra RAKOTONDRAMBOA Hanitra, Diakona no namaky ny Teny. Izany dia nalaina tao amin’ny:
Rota 4: 1-2;
Lioka 24: 15-24;
Efesiana 5: 1-2
Ny Mpitandrina RAZAFINDRAKOTOFANJARIVELO Perle no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Nohiraina ny FFPM141: 1 sy 4 mialoha izany. Natomboka tamin’ny Fiarahabana Apostolika ny toriteny. Ny Lioka 24:13-24 kosa no nangalana azy.
Araka ny lohahevitra banjinintsika, ny teny hoe: mampiorina dia midika ho fananganana zavatra izay mety ho vaovao na fanarenana ny simba.
Niandrandra fanantenana ny mpianatry ny Tompo noho ny fampianarany sy ny fahagagana nataony. Rehefa voahombo sy maty ny Tompo dia diso fanantenana izy ireo.
Niseho tamin’ny endriny maro izany fahakiviana izany, ary tonga hatramin’ny tsy finoany ny fanambaran’ireo vehivavy nahita ny fasana foana, ary efa tafatsangana i Kristy. Na teo aza anefa izany dia nampiseho tamin’ny mpianany i Jesoa fa velona Izy, ary niaraka tamin’izy ireo indray ka nanangana ny fanantenany.
Isika dia mitovy amin’ireo. Manantena ny Tompo isika kanefa indraindray dia tsy mifanaraka amin’izay antenaintsika ny zava-miseho. Ohatra amin’izany ny zava-misy ankehitriny. Nangataka isika hahafoana ny Covid-19, kanefa vao mainka mirongatra ny aretina. Kivy ny zanak’olombelona. Ao anatin’ny fahakiviantsika anefa no hanehoan’ny Tompo amintsika fa velona Izy, Hahatonga antsika ho mpandresy dia mila mino sy mahatoky ny Tenin’andriamanitra isika. Aoka tsy ny olana no hobanjinintsika fa ny Tenin’Andriamanitra ka hahatonga antsika hanangana fanantenana sy hampitombo ny finoantsika, tahaka ireo vehivavy nanambara ny fitsanganan’ny Tompo. Ny vehivavy no nahita voalohany ny fitsanganan’ny Tompo, satria izy ireo dia mavitrika amin’ny fampielezana vaovao. Ianareo vehivavy, ambarao ny Filazantsara. Aoka ho mpilaza vaovao mahafaly sahala ireo vehivavy nahita ny fasan’i Jesoa foana isika.
Noho ny fitiavany antsika dia nanolotra ny Zanany ho antsika ny Tompo, tahaka izany koa i Kristy, noho ny fitiavany ny Rainy sy ny zanak’olombelona dia natolony ny ainy ho fanavotana antsika. Zanaka nirian’Andriamanitra isika. Aoka isika handeha amin’ny fitiavana ka hanary ny toetra ratsy taloha. Na dia nihiboka tany am-ponja aza i Paoly dia mbola nahavita nampahery ny Kristiana handeha araka ny fitiavana. Na dia ao anaty fiarahamonina tsy tia fahamarinana sy mora tezitra aza isika, dia tokony hahery hampiseho toetra feno fitiavana. Aoka ho teny tsara sy feno fahasoavana no hivoaka ny vavantsika ary hahay hamela heloka sy hiaiky heloka isika. Mandehana amin’ny mazava, manaova ny tsara. Takin’ny Tompo ny fanehoantsika ny finoantsika. Aza mibanjina ny olana fa mahatokia sy minoa ny Tenin’Andriamanitra. Asehoy fa na misy aza ny olana dia mahay maneho fitiavana ianao.
Mampiavaka ny Dorkasy ny fanaovany asa soa. Aoka ianareo tsy hahery amin’ny teny fotsiny ihany fa amin’ny asa ihany koa dia ny asa soa izany.
Ny Fanahy Masina anie hanangana ny fanantenana sy ny finoana ao anatinareo sy hampitobaka ny fitiavan’Andriamanitra ao anatinareo.
Teo am-pamaranana dia nirary Paska feno fahasoavana ho an’ny Mpianakavin’ny Tompo ny Mpitandrina.
Vavaka setry ny Toriteny
Nisaorana ny Tompo noho ny Teniny sy ny fitiavany izay mandresy ny fahafatesana sy mitondra fanantenana. Nangatahana Izy hampiorina ny finoan’ny mpanompony sy hampifikitra azy ireo amin’ny Teniny.
Niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana faharoa ho fijoroana vavolombelona. Rehefa izay dia i RADIMIARILALAO Eléonie koa no nitondra ny tatitry ny sampana Dorkasy nandritran’izay erintaona izay.
Nambara ireo raharaha anatiny sy ivelany.
NY RAHARAHA IVELANY :
Nambara ireo fandraisana anjara tamin’ny hetsika rehetra teto amin’ny Fiangonana toy ny fotoam-bavaka isaka ny talata, ny alahady Mpitandrina.
Nampahafantarina ny Fiangonana ny fanohanan’ny sampana ny fampiofanana Mpitandrina.
Tsy adino ny fanatanterahana ny asa soa toy ny fanohanana ny toeram-pitsaboana, ny fitsidihana toby fitaizana ankizy, ny fanampiana ireo voafonja vehivavy eny Antanimora.
Notaterina ny fanarahan’ny sampana fiofanana sy ny fandraisany anjara tamin’ireo hetsika tany ivelany.
Amin’ny alalan’ny valopim-bokatra no hanatanterahana ny vokatra. Noho ny hamehana ara-pahasalamana dia voafetra ihany ny tontosa.
NY RAHARAHA ANATINY :
Namafisina ny fampahatsiahivana mahakasika ny fisorohana ny Covid-19. Efa miverina misokatra ny trano fiangonana ary manaja ny fepetra fisorohana ny aretina. Mivory ny Mpihevi-draharaha ny sabotsy izao amin’ny 8 ora.
Hafatry ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina
Ny Efesiana 5: 1-2 no nentin’ny Mpitandrina ampaherezana ny Sampana Dorkasy sy ny Mpino, tamin’ny endriny rakitsary izay nalefa teo amin’ny fafana. Aoka isika hoy izy, hanahaka an’Andriamanitra sy handeha amin’ny fitiavana ary nirary soa ho an’ny Sampana Dorkasy hahatontosa ny asany ny Mpitandrina.
RAKITRA SY NY FANOMEZANA
Feon’orga no nentina nanatontosa ny fanatazan-drakitra. Nohiraina avy eo ny FFPM 441:1 sy 3 ho fanolorana ny rakitra.
Nisaorana ny Tompo noho ny fanolorany ny tenany ho avotra ho an’ny mpanota. Nentina am-bavaka ny mpianakavin’ny finoana, ny namana sy ny havana ary ny Mpitandrina sy ny ankohonany. Nentina am-bavaka ny FJKM, ny firenena, ny Mpitondra ary ny vahoaka mba handresy ny Covid-19. Nofaranana tamin’Ilay vavaka nampianarin’ny Tompo izany.
Notokana tamin’izany ny fanamiana vaovao an’ny Sampana Dorkasy.
Vavaka: Nisaorana ny Tompo noho ny fotoana nahafahana nanatanteraka ny fanokanana ny fanamiana. Nentina am-bavaka izany fanamiana izany mba hanome voninahitra ny Tompo ny fisalorana azy.
Nentina am-bavaka ihany koa ny mpikambana hanome voninahitra ny Tompo.
Nisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo taorian’ny fanompoam-pivavahana.
Nohiraina ny FFPM 133: 1 sy 5 ary novakina ny Tondrozotra mialohan’ny natoloran’ny Mpitandrina ny Tsodrano.
Nikirakira fafana: RAZAFIMAHARO Kanto, RABIAZAMAHOLY Mahery
Naka ny rakitsary: HARENTSOA Rova
Nitendry orga: RANAIVOSON Jacky
Publié le 4 avril 2021 6 avril 2021
Alahady 04 Aprily 2021
FOTOAM-PIVAVAHANA ALAHADY FAHA 4 APRILY
Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy. Tanteraka tamin’ity andro Paska ity izany fanavotan’i Kristy izany. Resiny ny fahafatesana ka nitsangana tamin’ny maty Izy.
« Jesoa Kristy ilay Mpanavotra ». Izany no lohahevitra napetraka hobanjinin’ny Fitandremantsika amin’ity anio ity. Ny Biraon’ny Fiangonana no niandraikitra ny fanatanterahana ny fotoana. RAZAFINDRABE John Bam, Mpanolotsaina, no nitarika ny fotoana. RALAINDIMBY Haja, Mpitantsoratry ny vola, no nanao ny vavaka sy ny vakiteny. Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra no nitondra ny hafatra.
Novakiana ny Salamo 46 : 1-3, ho fiderana an’Andriamanitra : « Andriamanitra no aro sy hery ho antsika; Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny fahoriana Izy, Koa izany no tsy hatahorantsika, na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ho ao anatin’ny ranomasina aza ny tendrombohitra, Na mirohondrohona sy misamboaravoara aza ny onjany, ka mihorohoro ny tendrombohitra noho ny fisafoakany ».
Taorian’ny hira 142 : 1, 2, 3 : « Tafatsangana tokoa », dia nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra ny mpitarika. Misaotra ny Tompo noho ny fahasoavana noraisina isan’andro, ary nangataka ny fahafenoan’ny Fanahy Masina.
Noventesina ny hira FFPM 141 : 1, 2 : « Efa resy izao ». Feonkira fohy no taorian’izay.
RALAINDIMBY Haja no nanao ny vavaka sy vakiteny.
Ny perikopa anio dia ny
Hosea 13 : 14 – 15
Matio 28 : 1 – 10
Galatiana 3 : 10 – 14.
Natao ny hira Ffpm 526 : 1, mialoha ny toriteny.
Niarahaba ny mpianakavin’ny finoana ny Mpitandrina nitondra ny hafatra. Andro Paska dia ahatsiarovana ny nitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty. Ny Filazantsara araka ny Matio no nitondrany ny hafatra. Ity bokin’i Matio ity dia misy fizarana 6 lehibe ka ao amin’ny fizarana fahaenina farany no misy ity perikopa ity. Misy zana-pizarana 5 izy io ary fizarana fahadimy no misy azy. Ny Matio 28 dia misy fotokevitra 3 ny amin’ny fitsanganan’i Jesoa, ny amin’ny didiny sy ny fampielezana ny Filazantsara.
Ny mampiavaka ity Matio ity, mihoatra noho ny hafa, dia ny andininy fahavalo. Azo omena lohahevitra hoe « Ny olona mahazo ny hafatry ny Paska » izany hoy ny Mpitandrina.
Ireo olona ireo dia nandao ny toerany noho ny faharesena. Eo amin’ny andininy faha 8a. Ny mandao dia ny mpianatra, izay nahalala ny vaovao. Maria Magdalena sy ilay ilay Maria iray izy ireo. Niala faingana izy ireo, nandositra. Azo lazaina fa nandao ny toerana izay tsy nisy an’i Jesoa izy ireo.
Ny hafatry ny Paska dia tsy miova hatramin’izay dia ny ilay hoe : « Jesoa nohombona teo amin’ny hazo- fijaliana, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo ».
Tokony mampiorina ny fiainan’ny Kristiana ny andro Paska raha jerena. Ireo mpianatra ireto dia nihaino izay nolazain’ny anjely.
Namantatra hoe marina ve izany fanambarana izany, tonga ny hafaliana ary niala faingana ny toerana. Rehefa fantany fa mitombona ny teny izay nolazain’ny anjely, dia nino izy ireo. Mila mahay mihaino isika mba hiasan’i Jesoa eo amin’ny fiainantsika.
Ny toerana faharesena ambara eto dia ny fasana. Izany nefa amintsika dia milaza fahafatesana. Matetika isika dia manangana fasana kely any anatintsika any. Mety ahazoana voninahitra sy harena izany, nefa mety tsy ho mendrika eo anatrehan’ny Tompo.
Ny faharoa, raha tonga teo ny mpianatra dia nisy ny horohorontany. Izany dia milaza fahafatesana ihany koa. Rehefa misy izany dia miendrika faharesena. Rehefa tojo sarotra isika dia tsy mahajery intsony ny famonjen’i Jesoa Kristy.
Nisy koa ny fatahoran’ny mpiambina. Tonga tahaka ny maty ilay mpiambina noho ilay tahotra tao anatiny. Tahotra nahafaty mihitsy izany. In-365 ao anaty Baiboly no misy ny teny hoe « Aza matahotra ». Mitovy amin’ny taona iray, izany hoe tsy tokony hatahotra isika isan’andro isan’andro. Marobe ny toerana misy faharesena eo amin’ny fiainana. Tsy tokony hijanona amin’ny toerana tsy misy an’i Jesoa isika.
Faharesena ny tsy finoana ny fitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty. Tokony hitaona ny hafa isika ho amin’ny Tompo. Mbola faharesena ihany koa ny tsy fangalantsika ny safidy tsy hiaraka amin’ny Tompo. Ny olona manaiky hisafidy an’i jesoa, dia manaiky ny hitondra ny hazofijaliana. Tokony hibebaka isika, hanala izay ratsy amin’ny fiainantsika. Nanome ohatra ny Mpitandrina : Eritrereto hoe misy olona mipetraka amin’ny trano fasana, izany hoe, ny olona rehetra ao dia mpimamo, mpiteny ratsy, ….
Sao mbola misy an’izany any ? Tokony hafahan’ny Tompo izany.
Ho aiza tokoa moa isika raha tsy miala amin’izany ? Tokony mibanjina ilay toerana feno fiadanana, fiainana finaritra isika. Tokony manolo-tena isika rehefa tafahoana amin’ny Tompo. Tokony miankohoka isika ahafantarana fa afaka tamin’ny fiainana mangidy isika ; tonga amin’ny fiainana vaovao.
Ny olona mahazo ny hafatry ny Paska dia maika hilaza ny vaovao mahafaly (8b). Maika hilaza ny vaovao mahafaly ho an’ny mpianatra namany ireo. Tahotra mahavelona no nisy tao amin’ireo mpianatra. Ireto avy ireo vaovao mahafaly :
–	Tsy ato am-pasana Jesoa : Tsy razana ny Tompo fa Andriamanitra velona ; –	Tsy tany amin’ny maty no itadiavana azy fa any amin’ny velona indray ; –	Efa nitsangana Izy Tompo ary tena velona. Fandresena ho an’izay mino izany ; –	Efa nolazain’i Jesoa Kristy in-telo izany hafatra izany, fa tsy nilentika tao an-tsain’ireo mpianatra.
Tokony hanavao ny fomba fisainana isika, tsy hanao toy ireo mpianatra raha efa nambaran’ny Tompo ny zavatra hitranga, nefa tsy nety nino ireo.
Ekentsika ve izany vaovao mahafaly izany ? Ireo mantsy no entintsika hanao ny hazakazaky ny fiainana indray. Tokony hizara izany amin’ny hafa isika. Mbola maro manko no mila mandre izany. Manana antoka ny amin’ny fiainana mandrakizay isika, raha toa ka manaraka Azy ? Manaiky ny hizara izany. Tsy misy ny làlana hafa ankoatra an’i Jesoa ahazoana famonjena sy ahazoana ny fiainana mandrakizay. Tokony hihazakazaka, toy ireto mpianatra ireto isika, mba hilaza izany vaovao mahafaly izany.
Ny fanavaozana lehibe andrasan’ny Tompo amitsika dia ny mba ho maika hilaza ny vaovao mahafaly.
Nisy feonkira namarana izay hafatra nentin’ny Mpitandrina izay.
Nanatanteraka ny Vavaka fifonana sy ny vavaka fanoloran-tena ny mpitarika taorian’izay ary nofaranany tamin’ny fanonona ny Fanekempinoana laharana voalohany izany.
TENY FIARAHABANA NOHO NY ANDRO PASKA
Nanao ny fiarahabana noho ny andro Paska ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra. Faly noho ny fahatratrarana izao andro Paska. Ny Romana 5 : 1, 6, 8 no natambatra hifampiarahabana. Nanentana ny amin’ny fifampiarahaban’ny ao an-tokantrano ny tsirairay. Ny miarahaba milaza hoe « Mifalia amin’ny alalan’i Jesoa Tompontsika ». Ilay arabaina kosa hilaza « Dia hiara-belona Aminy isika. »
VAVAKA FANGATAHANA SY FAMARANANA NY FOTOANA
Ny Mpitandrina no nanao izany. Noentina am-bavaka ny fiainan’ny Fiangonan’Amparibe, ny an’ny FJKM. Ho Paska hitondra fanavaozana lehibe eo amin’ny fiainam-panompoan’ny tsirairay avy anie.
Noentina am-bavaka ireo mpianakavin’ny finoana tsy salama rehetra, manaraka fitsaboana, ireo izay azom-pahoriana. Noentina am-bavaka ny asa fivelomana, ny fianaran’ny ankizy, ny ao an-tokantrano mba hahitana fifaliana ary hiara-belona rehefa tonga ny fotoana hiavian’ny Tompo. Noentina am-bavaka ny asan’ny Fiangonana izay mbola marobe no miandry.
Nisy ny vavaka mangina ary nofaranana tamin’ny « Rainay Izay any an-danitra ».
Natao ny hira 133 : 1 « Efa namangy ny olony ». Notononina ny tondrozotra ary natolotra ny tsodrano.
Nofaranana tamin’ny hira Ffpm 146 : 1 ny fotoana.
Nandray an-tsoratra: ROBEL Hanitra
Naka ny sary sy rakitsary: HARENTSOA Rova
SVM Avril 2021
Sampana Vokovoko Manga sy Rantsana Fanantenana
" Fa isika tsy mba naman'izay mihemotra" Hebreo 10 : 39a
Ny alahady 21 febroary 2021 teo dia nisy ny antsam-piderana izay niarahana tamin’i Mialy RAKOTOMAMONJY sy NY KORAITA ho fanakalazana an’andriamanitra noho ny faha 30 taona ny SAMPANA VOKOVOKO MANGA SY RANTSANA FANANTENANA. Nisy ihany koa ny fandraisana anjara izay nataon’ireo ankizy sy tanora beazina ato amin’ny Rantsana Fanatenana mba hifady sy handa sahady ny zava-maha- domelina sy zava-mahamamo amin’izao androm-pahazazany sy fahatanorany izao, ka hahatonga azy ireo hahasahy hijoro vavaolombelona ho an’i Jesoa Kristy.
Ny hetsika moa dia tsy rindrakira fe rindrakira fotsiny fa natao hitoriana ny filazantsara ka andritra izany dia nisy ny fitoriana fa tempolin’Andriamnanitra ny tenantsika ary noharian’Andrimanitra ho tsara tahaka azy isika ka noho izany indrindra dia tsy tokony hopotehintsika amin’ireo karazam-pahotana maro samihafa.
Nandritra ny fiarahana niredona ny hiran’ireo mpihira, Mialy RAKOTOMAMONJY tamin’ny « TIAKO LOATRA » sy ny « IZAHO MATOKY ANAO »an’i NY KORAITA ary ireo hira maro be samihafa dia nanovy hery sy fifaliana ny rehetra ka sady voky ny fanahy no faly ny fo sy ny saina.
Najaina fatratra hatrany ny fepetra ara-pahasalamana nadritra io fotoana io.
Isaoranay etoana ny Ray aman-dreny Mpitandrina mivady sy ny Biraom-piangonana, ny sampana sy sampan’asa rehetra sy ny mpiandraikitra ny fafana izay nitondra anay am-bavaka sy nifanome tanàna ary nifarimbona tamin’ny fanatontosana ny hetsika ; ary ianareo mpianakavin’ny finoana tsy an-kanavaka tamin’ny fanotronana anay. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana anie hamaly fitia anareo.
Ho tohin’ny fankalazana, dia manasa anareo mpianakavin’ny finoana rehetra izahay ho tonga hanatrika ny fifampizarana izay hotanterahinay ny asabotsy 24 aprily 2021 amin’ny 9 ora maraina eto amin’ny tanànan’ny fiangonana. Zoky Seheno Rajaomaria no hitondra ny famelabelaran-kevitra araka ny lohahevitra hoe : « Miady amin’ny fihemorana ara-panahy ».